Paarlaamaan Awurooppaa dhimma Itoophiyaanota mana hidhaa Sa’udii jiranirratti murtee dabarse – Kichuu
HomeNewsWorldPaarlaamaan Awurooppaa dhimma Itoophiyaanota mana hidhaa Sa’udii jiranirratti murtee dabarse
Paarlaamaan Awurooppaa dhimma Itoophiyaanota mana hidhaa Sa’udii jiranirratti murtee dabarse
Manni Maree Gamtaa Awurrooppaa gidirfamuufi sarbama mirgoota namoomaa godaantota Itoophiyaa manneen hidhaa Sa’ud Arabiyaa jiran irratti raawwatamaa jiru cimsee balaaleffachuun murtee dabarse.
(bbcafaanoromoo)—Paarlaamaan kun murtee kana kan dabarse kora dhimmoota mirgoota namoomaa Ertiraafi Nikaraaguwaa keessatti raawwatamaa ilaaleen yoo ta’u, haalli qabiinsa lammilee Itoophiyaa Sa’ud Arabiyaa jiranii yaaddessaa ta’uu kaasuun yaada murtee kana dabarse.
Manni Maree Awurooppaa kun hanga ammaattillee lammileen Itoophiyaa manneen hidhaa Sa’udii keessatti haala hamaa ta’e keessatti qabamanii mirgoonni namoomaa isaanii sarbamee akka jiru eeruun balaaleffateera.
Gabaasa Huumaan Raayitis Waach kan eere Paarlaamaan kun, ji’a Ebala bara darbeerraa kaasee lammileen Itoophiyaa haadholiin ulfaafi daa’imman keessatti argaman 30,000 ta’an Yaman keessaa dhiibamanii akka ba’an taasifaman murtii malee mana hidhaa keessatti gidirfamaa jiraachuu ibseera.
Kanaaf, Miseensonni Mana Maree Awurooppaa aanga’oonni Sa’ud arabiyaa dubartootaafi daa’imman dabalatee kanneen rakkoof saaxilamaniif dursa kennuudhaan atattamaan akka gadhiisaniif waamicha dhiyeessaniiru.
Dabalataanis, aanga’oonni Sa’udii biyya hollaa waraanaa keeessa jirtu Yaman irraa baqachuun namoota gara daangaa isaaniitti seenanis haala nageenyisaanii eegameen simatanii wiirtuuwwan turtii sadarkaa idil-addunyaa eegggate akka galan gochuu qabu jedheera.
Mootummaan Sa’ud Arabiyaa gidiraafi hiraarsa godaantota Itoophiyaa mana hidhaa keessa jiran irratti raawwatamu atattamaan dhaabuun kunuunsi qoor-qalbiifi qaamaa akka taasifamuuf Manni Maree Awurooppaa kun gaafateera.
Mana hidhaa Sa’ud Arabiyaa keessatti rakkoo hamaa godaantota Itoophiyaa irra ga’aa jiru ilaalchisuun saba himaaleefi jaarmiyaaleen mirgoota namoomaaf falman gara garaa irra deddeebiin gabaasa dhiyeessaa turaniiru.
Godaantonni Itoophiyaa manneen hidhaa dhidhiphoo fayyaafi jireenyaaf yaaddessoo ta’an keessatti ji’ootaaf tursiifamuu isaaniirraa kan ka’e dhibee garaa garaatiif kan saaxilaman yoo ta’u kanneen lubbuun isaanii darbellee akka jiran BBC fi sabaa himaaleen gara garaa gabaasuun isaanii ni yaadtama.
Manni Maree Awurooppaa kun dabalataan hidhamtoota sammuu Ertiraa keessatti argaman, keessumaa waggoota 19 dura kan hidhame lammii Siwiidin Daawwit Yisihaaq dabalatee gaazexeessitoonni akka gadhiifamaniif gaafateera.
Adda Bilisummaa Oromoo: Walhimannaa hoggantoota ABO irratti Boordiin Filannoo Biyyaalessaa yaada furmaataa dhiheesse
Ethiopia: Welcome to the most absurd imprisonment system!!